Ịdị ọcha n'imi na ụmụ ọhụrụ | Bezzia
Ịdị ọcha n'imi na ụmụ ọhụrụ
Maria Jose Roldan | 05/09/2021 11:36 | Nwa
Idebe imi n'ime ụmụ ọhụrụ bụ ọrụ ndị nne na nna ga -emerịrị nke ọma na nke ọma. Ọ dị mkpa idebe ịdị ọcha a oge niile, ọkachasị mgbe nwa ahụ na -enwe afọ ntachi. Inwe ike ihicha oghere imi nwere ike inyere nwa ahụ aka iku ume nke ọma, ihe bụ isi mgbe a bịara n'ịrahụ ụra nke ọma.
N'isiokwu na -eso, anyị ga -ekwutụkwu gbasara ịdị ọcha imi n'ime ụmụ ọhụrụ na ntuziaka ndị a ga -agbaso ime ya n'ụzọ kacha mma.
1 Mgbe a ga -eme ịdị ọcha imi na ụmụ ọhụrụ
2 Nzọụkwụ mgbe ị na -eme ịdị ọcha nke imi n'ime ụmụaka
Mgbe a ga -eme ịdị ọcha imi na ụmụ ọhụrụ
Ekwesịrị ịdị ọcha dị otú ahụ oge niile iji wepu imi dị ka o kwere mee wee hichaa imi. Ọ bụrụ na nwa ahụ nwere oyi, ndị nne na nna ga -akpachapụ anya debe ịdị ọcha dị otu a ma hụ na onye obere nwere ike iku ume nke ọma. Iwepụ oke imi dị ka o kwere mee dịkwa mkpa ka obere nwa ghara ịrịa ọrịa ụfọdụ dịka sinusitis.
Ewezuga ịdị ọcha nke imi, ndị nne na nna nwere ike họrọ idobe igwe iru mmiri n'ime ụlọ ahụ ka ha debe gburugburu iru mmiri ma zere mkpọchi na akụkụ imi nwa. N'ọnwa oyi na n'ihi ikpo ọkụ, gburugburu ebe obibi na -adị oke nkụ na mkpọchi nwere ike ịka njọ, ya mere ọ dị mkpa iji humidifier.
Nzọụkwụ mgbe ị na -eme ịdị ọcha nke imi n'ime ụmụaka
Ihe mbụ ndị nne na nna kwesịrị ime bụ idobe nwa ha, n'elu elu dị nro na ntụsara ahụ. Ihe ọzọ ndị nne na nna kwesịrị ime bụ ime ka nwa ha nọrọ jụụ dịka o kwere mee. Maka nke a, ọ dị mma ịnweta enyemaka nke onye otu gị ma ọ bụ onye ọzọ.
Mgbe ahụ, ha ga -agbakwunye ntakịrị mmiri nke saline physiological n'oghere imi. Ọbara ahụ na -enyere aka iwepu imi nke gbakọbara wee si otú a hụ na onye obere nwere ike iku ume nke ọma. Ewezuga ọbara ahụ, nne na nna nwekwara ike iji nnu nnu nke na -enyere aka ihicha imi nke ọma.
Onye na -agba aspirator a ma ama na -abụkarị arụmụka ma a na -atụ aro ka ejiri ya ma ọ bụrụ na imi dị oke mkpa. Ị ga -akpachapụ anya mgbe ị na -eji ya maka na ọ bụrụ na ejiri ya na mberede, ọ nwere ike bute ọnya ntị dịka otitis. Na agbanyeghị, ndị ọkachamara na -adụ ọdụ ka a na -eji ọbara eme ihe n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla enwere ike.
Na nkenke, ịdị ọcha nke imi dị ezigbo mkpa n'ime ọnwa mbụ nke ndụ nwata ahụ. Dị ka anyị kwuworo n'elu, ọ bụ ihe a ga -emerịrị nke ọma iji zere ime ka ụjọ tụwa nwa ọhụrụ. Ekwesịrị ịdị ọcha ka nwatakịrị ahụ zuru ike wee tinye n'ọrụ n'ọtụtụ ikpe, ọbara mgbatị ahụ ma ọ bụ nnu nnu.. Mkpọchi n'ime ụmụaka bụ ihe a na -ahụkarịN'ihi nke a, ịdị mkpa ịdị ọcha ga -ewepụ imi karịrị akarị site na imi imi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Nwa » Ịdị ọcha n'imi na ụmụ ọhụrụ
Otu esi amata ma ọ bụrụ na ị bụ onye na -achọkarị izu oke
Ibe ọkụkọ na ose uhie na almọnd